आकाशवाणी (Aakashwani): June 2013
टोपी ब्यापारीको कथा
एकजाना टोपी ब्यापारी ब्यापारको दौरान कतै जाँदै रहेछ । हिंड्दा-हिंड्दा थकाई लागेर एउटा रुखको छाँयामा आराम गर्दा-गर्दै निदाएछ । ब्युँझिएर हेर्दा त आफ्नो पोकोमा भएको सबै टोपी त बाँदरले लगाएर रुख माथि पो चढेका रहेछन् । फसादै परेछ ! अनी उस्ले एउटा जुक्ती लगाएछ; आफुले लगाएको टोपी पनि फुकालेर भुँईतिर फालेछ ।
नक्कल गर्न सिपालु बाँदर पनि के कम; उनिहरुले पनि टाउकामा लगाएका सबै टोपी भुँईतिर फालेछन् ।
हतार-हतार टोपी बटुलेर चतुर ब्यापारी कुलेलम ठोकेछ ।
बाबुराम भट्टराइले 'त्याग देखाउन पार्टीको उपाध्यक्ष पदबाट रजिनामा दिएको' कथनले यो कथा फेरी याद आयो !
तर, कथा अझै सिद्धिएको छैन ।
अर्को भाग :
एकजाना टोपी ब्यापारी ब्यापारको दौरान कतै जाँदै रहेछ । हिंड्दा-हिंड्दा थकाई लागेर एउटा रुखको छाँयामा आराम गर्दा-गर्दै निदाएछ । ब्युँझिएर हेर्दा त आफ्नो पोकोमा भएको सबै टोपी त बाँदरले लगाएर रुख माथि पो चढेका रहेछन् । फसादै परेछ !
तर यसपटक त्यो ब्यापारी कत्ती पनि बिचलित भएनछ । उस्ले 'टोपी ब्यापारीको कथा' पढेको रहेछ ।
उस्ले पनि त्यही जुक्ती लगाएछ; आफुले लगाएको टोपी फुकालेर भुँईतिर फालेछ ।
तर 'टोपी ब्यापारीको कथा' बाँदरहरुले पनि पढीसकेका रहेछन् । त्यसैले एउटा बाँदर रुखबाट झटपट ओर्लिएर ब्यापारीले भुँईमा फाल्या टोपी लिएर रुखमाथी चढेछ ।
ब्यापारीले जमाना बदलीईसकेको थाहै पाएको रहेनछ !
Labels: Baburam Bhattrai, Note, Short Story
अंग्रेजीको लागि नेपाली भाषाको बली !
अधिकांस सर्वसाधारण र गरीबहरुले पढने गरेको सामुदायिक बिद्यालय सुबिधासम्पन्न निजी बिद्यालयभन्दा कमजोर हुनु स्वाभाबिक हो । किनकी अंग्रेजी स्कुलहरुले विद्यार्थी भर्ना गर्नुपूर्व नै उस्को क्षमता जाँच गरेर मात्र भर्ना गर्छन् । अझ कतिपय नाम चलेका निजी बिद्यालयले त विद्यार्थीको त जाँच लिन्छन् नै, उनिहरुको अभिभावकको पनि आर्थिक र पढाई-लेखाइ बारे जानकारी लिदै पूर्वपरिक्षा लिन्छन् । बाबु-आमा अशिक्षित र गरीब छन् भने घुमारो भाषा प्रयोग गरेर भए पनि त्यस्ता विद्यार्थीको भर्ना नै लिंदैनन् । अनी अङ्रेजी स्कुलमा भर्ना नगराइएका लद्दुपाँड र गरीबहरु कता जान्छन् ? उही सामुदायिक बिद्यालयमा । धन्न पो अहिले जती विद्यार्थी पनि पास गराउँछ सामुदायिक बिद्यालय ।
सामुदायिक बिद्यालयका अधिकांस विद्यार्थीहरु फेल हुने भनेको अङ्रेजी बिषयमा हो । त्यस पछी मात्र गणितमा । सामुदायिक बिद्यालयका विद्यार्थीहरु नेपालीमा फेल भएको कहिले कसैले सुन्या छ ? छैन नै होला ! अंग्रेजी हाम्रो भाषा होइन, बिदेशी भाषा हो । यो हाम्रो गाउँघरमा जहाँ सुकै प्रयोगमा आइराख्ने भाषा पनि होइन । यस्को व्याकरण पनि नेपालीको जस्तो सजिलो छैन । जस्तो लेखिन्छ त्यस्तो पढदा पनि असुद्ध हुने भाषामद्धे अङ्रेजी पनि एक हो । जस्तो Do = डु हुन्छ, Go = गु हुँदैन; 'गो' भन्नु पर्छ रे । लेखिन्छ Busy (बुसी), भन्नु पर्छ बिजी । लेखिन्छ Physiology (फिसियोलोजी), भन्नु पर्छ साइकोलोजी । यस्को बिपरित नेपाली भाषामा जे लेख्या छ त्यही पढे अझ सुद्ध उच्चारण हुन्छ । तर अंग्रेजीमा त्यस्तो हुन्न । यस्तो लेख्ने एउटा, भन्नु पर्ने अर्को पनि कुनै बैज्ञानीक भाषा हुन्छ ? हुनत यो समस्या टार्न उनिहरुले 'फोनेटिक सिम्बोल (Phonetic symbol) पनि नबनाएका होइनन् । तर सबैले यो फोनेटिक सिम्बोल बुझ्दैनन् पनि र यस्लाई पच्छयाएर साद्धे पनि लाग्दैन । त्यसैले अङ्रेजी दुरुह भाषा नै हो, शायद चाइनिज भाषाभन्दा पनि बढी ।
हुनत संसारका धेरै भन्दा धेरै भाषा जान्नु राम्रो कुरा हो । तर बिदेशी भाषाको बिकासको लागि लागि आफ्नो नेपाली भाषाको बली चढाउँनु हुन्न । अहिले नेपालीमा जती अंक ल्याउनु पर्छ, अंग्रेजीमा पनि उत्ती नै ल्याउनु पर्छ । झट्ट हेर्दा यो समानता जस्तो देखिए पनि असमानता हो । अङ्रेजीमा १५ अंक ल्याए पनि पास हुने (संस्क्रितमा जस्तै) ब्यवस्था गर्ने हो भने सामुदायिक बिद्यालयको कोही पनि फेल हुँदैन । अंग्रेजीभाषाको लागि ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई फेल गराएर निरास पार्नु, एसएलसी बाटै पढाई प्रती बितिष्णा जगाएर कुलत/ फटाइँको बाटो पक्रिने बनाउने अनी कतिलाई आत्महत्याको बाटोसम्म डोहोर्‍याउनु ठीक हुँदैहोइन ।
समस्या बिद्यालय र शिक्षकमा मात्र छैन । मूल कुरा त शिक्षा निती नै गलत छ । यस्लाई सुधार गर्नु पर्छ ।
Labels: English, Nepali language, Note
जागित्रले बोलाएपछि - भक्त खपाङ्गी “भारी पुग्यो बाजे ?” मुठीको घाँस अघि काटेको थुप्रामा राखेर फेरि चियाको बुटामुनि घाँस काट्न घोप्टि...
'साप्ताहिक' (कान्तिपुर पब्लिकेशन)मा प्रकाशित
DEMOCRACY COMIC BOOK PROMOTES CIVIC PARTICIPATION BY NEPALI YOUTH
POKHARA - The U.S. Embassy’s American Center launchedademocracy comic book here today with the help of famed Nepali cartoonist Durga Bara...
- अभय श्रेष्ठ‍‍‍ यो वर्ष कृष्णाष्टमीताक मेरो गाउँ खासै होहल्लामय भएन। कारण थियो, बत्ती आउने समयमा पनि बारम्बार अघोषित लोडसेडिङ। बिहान...